स्थानीय निर्वाचन प्रचार योजना र महत्व – SunkoshiNews
स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट छ । यसबारे पार्टीले सफल र सशक्त प्रचार योजना निर्माण गर्न ढिला भइसकेको छ । एकातिर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भूमिकामा रहेको माओवादी केन्द्र, सँगै बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन, अर्कोतिर भएका उपलब्धि पनि नामेट पार्न लागेका केपी ओलीको वरिपरि केन्द्रीकृत भएका प्रतिगामी शक्तिहरू ! त्यसैले स्थानीय निर्वाचन मुख्यतः अग्रगामी र प्रतिगामीबीचको लडाइँ हो । निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसहितका अग्रगामीहरू हावी हुन के हुन सक्छ त प्रभावकारी प्रचार योजना ? छलफल, सुझाव र परिस्करणको अपेक्षासहित केही प्राथमिकता र त्यसको राजनीतिक महत्वबारे उल्लेख गर्दछु ।
१) सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक काम ः
पहिलो, निर्वाचनको तयारीलाई केन्द्रका राखेर सबै कामलाई व्यवस्थित गर्ने हो । त्यसका लागि प्राथमिक काम पार्टी पंक्तिमा सैद्धान्तिक अध्ययन तथा छलफलमै जोड दिनु हो । पार्टीको हालै सम्पन्न महाधिवेशनले पारित गरेका विचारहरुलाई स्थापित र कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रशिक्षण तीब्र बनाउनु पर्छ । त्यस प्रशिक्षणमा माओवादी केन्द्रनिकट पत्रकारहरुलाई विशेष प्राथमिकतासहित समावेश गराउनु पर्छ । पार्टीको विचार र नेतृत्वलाई स्थापित गर्न तथा गलत विचारको विरोध गर्न एकीकृत ढंगले मिडिया परिचालन गर्नुपर्छ । यसका लागि आफ्नै मिडियाको व्यवस्थित परिचालन र सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्नुपर्छ ।
क) आफ्नै मिडियाको व्यवस्थित परिचालन ः
उच्च प्रविधि अपनाउँदा हामीले परम्परागत प्रचार अभियानलाई बिर्सने गल्ती गर्नु हुँदैन । खासगरी जनतासँग भौतिक रूपमा नै एकाकार भएर गरिने प्रचारको तरिकामा हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ । हामीले ‘कनेक्सन’भन्दा ‘रिलेशन’लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । उच्च प्रविधिको आफ्नै विशिष्ट महत्व छ तर प्रविधिमा मात्रै रुमल्लिएर हामीले जित्न सक्तैनौं । निर्वाचनको यो विशेष अभियानमा हामी उच्च प्रविधिको प्रयोगबाट भाग्न सक्तैनौं र भाग्न मिल्दैन पनि ।
ख) सामाजिक सञ्जालको उपयोग ः
फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालले पार्ने नकारात्मक प्रभाव त छदैछ तर तत्काल पार्ने नकारात्मक प्रभाव र परिणामबाट जोगिन यसको सचेत रुपमा प्रयोग भने गर्नैपर्छ । हाम्रो जस्तो देशमा यो गलत हो तर यसबाट तत्काल भाग्न सक्ने अवस्था छैन । यसैले तल बुथसम्म नै आम जनतासम्म जोडिने गरी संयन्त्र बनाउन सक्नुपर्छ । जसले पार्टी र गठबन्धनको पक्षमा प्रचार र विपक्षीको भ्रमलाई तत्काल चिर्न सकियोस् ।
२) सांगठानिक काम ः
माओवादी आन्दोलनमा जोडिएका, माओवादीनिकट पत्रकारहरुलाई संगठनमा जोड्न विशेष पहल बढाउनै पर्छ । निर्वाचनको अभियानसँगै संगठन विस्तारमा जोड गर्ने र प्रचार कार्यमा सबैलाई सक्रिय बनाउने गरी संयन्त्र निर्माण गर्ने काम नै आजको मूल संगठनात्मक काम हो । त्यससँगै प्रतिगामीहरू विरुद्ध र चुनावी गठबन्धनमा रहेका दल निकट पत्रकारहरुलाई समेटेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयुक्त मोर्चा बनाउने, त्यस मोर्चाको आचारसंहिता नै निर्माण गरेर त्यस अनुरुप प्रचारका लागि अभियान नै निर्माण गर्ने काममा हामी जुट्नुपर्छ ।
वाम पार्टी फोरेर प्रतिगामी र विदेशी शक्ति केन्द्रसँग आत्मसमर्पण गरेको, भारतीय संस्थापन पक्षसँग मिलेर नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन सक्रिय भएको, आफूलाई कम्युनिस्ट बताउनेले पौराणिक कथा, जसको वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाण छैन, राम चितवनमा जन्मेको जस्ता कुरा उठाएर धार्मिक भावनालाई भड्काउन खोजेको, समावेशी, समानुपातिक, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धि अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा भएकाले प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन, प्रतिक्रान्तिको झण्डा प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा नै उठाउन राम र अयोध्याको प्रसंग ल्याएर देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले अभियान नै चलाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने र कम्युनिष्टको एक घटकका अध्यक्ष केपी ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर अर्काे कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्ध साम्राज्यवादी शक्तिले जनताको धार्मिक, साँस्कृतिक मनोविज्ञानमा खेलेर घृणा पैदा गराउने, धार्मिक हिंसा गराउने, प्रतिक्रान्ति गर्ने गुरुयोजना रचेकोे यथार्थलाई हामी माक्र्सवादीहरुले सहजै विश्लेषण गर्न सक्छौं ।
जुनसुकै राजनीतिक अभियान सफल बनाउन मिडिया अपरिहार्य हो । राजनीतिक दलले बनाएका विचार, एजेण्डा प्रवाह र स्थापित गर्ने काम मिडियाले नै राम्ररी गर्न सक्छ । समयसँगै विकसित भएको मिडियाको प्रयोग र परिचालनमा सिपालु शक्ति र व्यक्तिले नै आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउने सम्भावना बढी हुन्छ ।
गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याएर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, समानुपातिक र समावेशीको मुद्दालाई राज्य तह र दलहरुमा कार्यान्वयनका लागि माओवादीको बलिदानीपूर्ण संघर्ष र पहल नै मुख्य भएकाले जसको नीति, उसैको नेतृत्वका लागि जनतालाई विनम्रतापूर्वक विशेष अनुरोध गर्नुपर्छ ।
(लेखक माओवादी केन्द्रक, प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उपप्रमुख हुन्।)
विप्लवका दर्जनौं नेता-कार्यकर्ता माओवादी केन्द्र प्रवेश (नामावलीसहित